Dowladda Ashraf Ghani ayaa mas'uul ka ah isbeddel kasta oo militari oo ka dhaca Afgaanistaan. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Dowladda Ashraf Ghani ayaa mas’uul ka ah isbeddel kasta oo militari oo...
Dowladda Ashraf Ghani ayaa mas’uul ka ah isbeddel kasta oo militari oo ka dhaca Afgaanistaan.
Daalibaan ayaa sheegtay in weerarada Mareykanku la beegsaday Helmand iyo Kandahar ay xadgudub ku yihiin heshiiskii dhexmaray iyaga & Washington, waxayna wacad ku mareen in aan laysaga hadhi doonnin oo ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo aan la mahadin.
Bayaan ay soo saartay Daalibaan waxay ku sheegtay in “dowladda Ashraf Ghani ay mas’uul ka tahay wax kasta oo isbadal milatari ah oo dhaca bilaha soo socda, iyaguna ay qaadi doonnaan howlgalo balaadhan.”
Daalibaan waxay cambaareysay weeraradii Mareykanku Arbacadii la soo dhaafay, ku dilay dagaalyahannadeeda, waxayna cawaaqibka arrintaa ka dhasha dusha u saartay maraykanka.
Dhankiisa Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanku Anthony Blinken wuxuu sheegay in Daliban haddii ay xoog ku qabsato Afghanistan ay noqondoonaan dawlad la takooro ayna waayi doonto taageerada caalamka.
Tani waxay imaaneysaa iyadoo Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u xaqiijiyay dhigiisa Afghanistan Ashraf Ghani in Washington ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowlada Afghanistan.
Bayaan ka soo baxay Aqalka Cad, ka dib wadda hadal taleefan oo dhexmaray labada madaxweyne, ayaa lagu sheegay in ay yihiin weerarada Daalibaan kuwo ka hor imaanaya balanqaadkeedii ahaa in ay taageeri doonnaan in arimaha lagu dhameeyo wadahadal.
Dhamaan amuurahani waxay ku soo aadayaan iyadoo militariga Mareykanku, uu ku dhawaaqay inuu dhameystiray ka bixitaankiisa Afghanistan “in ka badan 90%”, ayna Washington dhameystireyso ka bixitaankeeda bisha Sebtember ee soo socota
Dowlada Afghanistan waxay ku soo rogtay 31-ka gobol oo ka mid ah 34 gobol ee dalku ka koobanyahay, bandowgii, habeenimadii jimcaha ka bilawday, waxayna boqolaal ciidan ah geysay xadka Pakistan, si looga hortago rabshadaha & weerarada sii kordhaya ee ay waddaan Dhaqdhaqaaqa Daliban.
Waxaa xusid mudan in weeraro baaxad leh Daalibaan ay hayso xuduudaha waddanka laga galo iyo tobanaan gobol iyagoo weliba isku xeeray caasimadaha gobolo badan tan iyo horaantii bishii May.
Next articleSomali PM sacks top intelligence officials